Kedu ihe bụ oke ala? | Network Meteorology
A na-ahụkarị ọkwa mbụ na troposphere, nke akọwapụtara site na mmetụta nke ala ala, nke a maara dị ka mbara ala oyi akwa. Ọ bụ ngwakọta ikuku dị egwu na-achịkwa ya, nke esemokwu na-adịgide adịgide na ihu ala siri ike nke ala na-ebute site na ntụgharị nke ikuku ikuku mgbe ewe iwe.
A na-ekenye oyi akwa a otu elu site na 600 ruo 800 m, ma ọ nwere ike ịdị site na mita ole na ole ruo otu ma ọ bụ kilomita abụọ, dabere na ihe dị iche iche dị ka ọdịdị ala, oke iwe, ọdịdị nke ihe ọkụkụ, oke ikuku, ogo nke kpo oku ma ọ bụ ịjụ oyi nke ala, ọkụ ọkụ na iru mmiri, wdg. N'ụbọchị, ntinye ọkụ na ikuku ikuku na-esote na-eme ka ọkpụrụkpụ nke ókèala ala, nke ruru ogo ya kachasị elu n'oge ụtụtụ; na ntụle, n'abalị ahụ jụrụ nke ala na-egbochi ọgba aghara na ọkpụrụkpụ ya na-ebelata.
Mgbe ụfọdụ, na mgbakwunye, usoro kwụ ọtọ nke oke ala ahụ na-eme ka o nwee ike ịiche ọtụtụ ọkwa:
1) a oyi akwa laminar oyi akwa, na kọntaktị na ala, obere obere milimita ole na ole, na-achịkwa mmetụta nke viscosity n'elu;
2) mgbe ahụ a oyi akwa oyi akwa ọtụtụ iri puku mita dị elu nke e ji oké ọgba aghara nke ikuku mara; na
3) ọkwa dị elu, ebe Coriolis na-agbanye ikuku, akpọ ekman akwa.
Ugbua n'elu troposphere a na - akwụghị ụgwọ dị, ikuku dị ọcha ma na - adịchaghị ala, ebe ọnọdụ okpomọkụ na - adaba na nkezi 6 ºC / km.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Kedu ihe bụ oke ala?